Iphrinta Yodonga: Isixazululo Esimile Sokuphrinta Sezindonga Zangaphakathi Nangaphandle | Martech Zone
NgoLwesine, Juni 3, 2021 NgoLwesine, Juni 3, 2021 Douglas Karr
Nginomngane wami odweba futhi apende imidwebo yezindonga futhi enze umsebenzi omangalisayo. Ngenkathi lobu buciko bungukutshalwa kwemali okungakholeki okungaguqula indawo yokusebenzela noma indawo yokuthengisa, ikhono lokuklama nokudweba isithombe esinembile esikhaleni esime mpo lashiywa ikakhulu ekunqumeni ukufakwa noma ukunikezwa komculi. Ubuchwepheshe obusha bokuphrinta buvelile obuzoguqula lokhu, noma kunjalo… mpo odongeni amaphrinta.
Ubuchwepheshe bokuphrinta beWall Printer bamuva buvumela ukudwetshwa kwe-elekthronikhi kwamafayela amakhulu wezithombe ezidijithali, imidwebo, imidwebo esezindongeni, noma izimpawu zombhalo cishe kunoma iyiphi ingaphakathi nengaphandle. Imishini yabo yenzelwe ukuphrinta ezindaweni eziningi ezibandakanya ukhonkolo, uthayela, ingilazi, insimbi, izitini, ukhonkolo, i-vinyl nezinkuni.
Esikhathini esingaphansi kweminyaka emibili, iThe Wall Printer isivele ithengise imishini yayo kumabhizinisi angaphezu kwama-40 kulo lonke elaseNyakatho naseNingizimu Melika, nase-UK. Amaphrinta amile ahlinzeka ngokusetshenziswa okungenakubalwa kokudala, okusebenzayo, nokujabulisayo okuhumusha kube ngamathuba ebhizinisi wangempela ezinkampanini nakosomabhizinisi abazisebenzisayo.
Bheka ukuthi amanye amakhasimende asebenzisa kanjani noma ahlela kanjani ukusebenzisa imishini:
Omunye wabasabalalisi abasanda kwenziwa eFlorida, iMiArte eNaples FL, ngemuva kokuphrinta isithombe sabo sokuqala esingu-5'x 8 'nokuthumela izithombe ku-Facebook uthi, “Simangele ngempendulo. kunjengokungathi abantu bebelilindele leli thuba. ” Elinye ikhasimende laphendula lathola inkontileka ngale Wall Wall ukuphrinta imidwebo emibili eyisikwele engu-8 'odongeni, olwalufakwa ophahleni lwakha udonga lwesitayela.
Umnyango wezemidlalo ophezulu we-D1 University ubheke ukuthenga iTWP Machine ezosetshenziswa ekubonisweni ebholeni, kubhasikidi nakwezinye izindawo zezemidlalo nemicimbi, nasezindongeni zezakhiwo zabasubathi, ngaphambi kwemidlalo emikhulu yasekhaya.
Abahlobisi bangaphakathi bathenga imishini ukusiza ngokuhlanganisa ukuboniswa kokuzilibazisa komuntu siqu kwamakhasimende abo noma izidingo zobuciko bodonga ezindaweni zokuhlala nezentengiso nasezindaweni zokusebenza.
Indaba Yephrinta Yodonga
Ngenkathi usomabhizinisi onguchungechunge uPaul Baron efuna into enkulu elandelayo, wahlangana nomqondo omusha: ukuphrinta mpo. Kwakungumqondo omusha eMelika kepha waziwa iminyaka kulo lonke elase-Asia, eNdiya, eMiddle East naseYurophu. Umqondo wokudweba izindonga zangaphakathi nangaphandle ezingabizi kubaculi nabanikazi bezakhiwo wamthokozisa. Ukuphrinta ezindongeni zanoma yikuphi ukwakheka komhlaba, ngokuthembekile nangokuqondile, kwamthinta.
Ngemuva kokubheka kanzima kubakhiqizi abambalwa abanikeza lobu buchwepheshe obusha, ngo-2019 uPaul waphothula isivumelwano nomkhiqizi omdala futhi ohola phambili e-Asia. Wabakhetha, wathi, ngoba inani nenani lentengo lihlanganiswe kahle nekhwalithi yokwakhiwa nokuhlanganiswa, nokusekelwa ukuze kukwazi ukukala ukuhlangabezana nezidingo zezimakethe zaseNyakatho naseNingizimu Melika.
Kusukela lapho inkampani ithengise ukusatshalaliswa ezimakethe ezingaphezu kwezingu-20 futhi yasiza ukusungula amabhizinisi amasha kulo lonke izwe laseMelika naseCanada, iNingizimu Melika, i-UK nasePuerto Rico. Bamema amakhasimende amasha ukuthi azofunda nge-Wall Printing kanye nethuba lebhizinisi eliphoqelelayo eliyimele.
Iphrinta yeWall izokwanda kulo lonke elaseNyakatho naseNingizimu Melika, e-UK naseCaribbean ngokushesha kule minyaka embalwa ezayo. Njengoba amabhizinisi wokuphrinta odongeni ekhula, inkampani izobasekela ngezixazululo ezibonakalayo, ama-inki, izingxenye, insizakalo evelele, kanye nokumaketha ukuze bandise izinsizakalo zabo ze-Wall Printing eziphumelelayo endaweni.
Ngenkathi ubuchwepheshe bokuphrinta mpo busetshenziswe emazweni omhlaba iminyaka ethile manje sebutholakala kumabhizinisi kulo lonke elaseNyakatho naseNingizimu Melika.
UPaul Baron, isikhulu esiphezulu seWall Printing USA
Imibono emisha iyaqhubeka nokuvela kuma-Wall Printers abo njengoba amakhasimende ecela ubuciko bedijithali ezindongeni zazo zonke izinhlobo, ngaphakathi nangaphandle.
Funda kabanzi Ngephrinta Yodonga
Tags: ukuphrinta kwe-murali-muralsiphrinta yodongaukuphrinta mpoimidwebo esodongeniiphrinta yodonga